Goormuu diyaar noqonayaa tallaal la isku halleyn karo ee Faayraska Corona? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Goormuu diyaar noqonayaa tallaal la isku halleyn karo ee Faayraska Corona?
Qaadashada tallaal ay wehliso daweyn waa waddada ugu wanaagsan oo “cudurka looga badbaadi karo”.
Tallaalka shirkadaha Pfizer/BioNtech
Tallaalka Moderna waxaa loo sameeyey si la mid ah waddadi loo maray tallalka shirkadda Pfizer.
Shirkadda sameysay waxay sheegtay 94.5% inuu tallaalkan uu cudurka dadka ka difaacayo
UK xilliga guga waxay heli doontaa shan malyan oo tallaalkaasi ka mid ah
Qofka waxaa la siinayaa laba qayb oo dawada ka mid ah oo ay afar toddobaad u dhaxeyso
30,000 oo qof ayaa tijaabada tallaalkan ka qayb qaatay halka kala bar dadkaasi tallaal ahaan u qaateen barka soo harayna irbad ahaan loo siiyey
Balse tallaalkan Moderna wuxuu kaga duwan yahay kii hore oo ay labada shirkadood soo saareen haddii u helo qabow gaaraya -20C ilaa lix bilood inuu ooli karo.
Jaamacadda Oxford/Tallaalka AstraZeneca
Tijaabada tallaalka ay sameysay Jaamacadda Oxford ayaa lagu ogaaday inuu difaac adag uu usameeyo dadka da’da ah ee lagu tijaabiyey.
Laba toddobaad marki ay ka soo wareegtay dadka lagu tijaabiyey marki ay tallaalkaasi qaateen waxaa la ogaaday 99% iney cudurka ka gaashaanteen
UK waxay dalbatay 100 milyan oo tallaalkaasi ka mid ah
Tallaalkana waxaa qofka loo siinayaa laba xidhmo
Tijaabadana weli waa mid socota
Tallaalkan wuxuu seddexdi tallaal ee hore uu kaga duwan yahay, ayaa ah inuusan u bahneen in lagu keydiyo cimilo aad u qaboow.
Maxay yihiin tallaalada kale ee la soo saarayo?
Natiijada tijaabooyinka tallaallada kale lagu sameeyey ayaa la filayaa in toddobaadyada soo socda la shaaciyo.
Tallaalka Sputnik V oo uu Ruushku sameeyey wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah tallaaka ay sameysay Jaamacadda Oxford, waxaana la sheegay 92% in tallaalkaasii tijaabadiisa lagu guuleystay
Tijaabada Janssen dalka UK oo keli ah waxaa laga qayb geliyey 6,000 oo qof, heer caalamina 30,000 oo qof oo tabarrucayaal ah
Machadka Wuhan ee Shiinaha soo saara waxyaaba Bilogy la xiriira iyo shirkadda Sinopharm iyo Machadka Cilmibaadhista Gamaleya ee laga leeyahay Ruushka waxay wadaan tijaabooyin gabagabo maraya.
Inkasta oo tijaabada tallaalka ay sameysay shirkadda Shiinaha ee Sinovac oo ka socday dalka Brazil tijaabadiisa la joojiyey kaddib marki ay dhaceen dhowr kiis oo dhimasha ah oo uu tallaalka ku keenay tabarrucayaal tallalka lagu tijaabiyey.
Tallaalka yaa marka hore heli doona?
Taasi waxay ku xirantahay halka uu Covid-19 sida aadka ah uu ugu faafo, tallaaka diyaarka noqonaya iyo bulshooyinka uu cudurka sida aadka ah uu u haleelay.
Dalka UK goobaha loo saadaaliyey iney noqon karaan kuwa ahmiyadda ugu horreeyo la siiyo ayaa lagu sheegay xaruumaha dadka waayeelka ah lagu xannaaneeyo oo dalkaasi ku yaalla, waxaana ku xigi doona xirfadlayaasha caafimaadka iyo dadka ay da’doodu tahay 80 jirrada.
Khatarta ilaa iyo hadda ugu weyn ee Covid-19 waa da’da.
Maxay yihiin waxyaabaha loo baahan yahay in la qabto?
Tijaabooyinka socda oo la ogaado tallaaka inuusan wax dhib ah keeneyn uu badqabo
In la helo shirkado iyo warshado waaweyn oo caalamka ka haqabtiri kara baahida tallaalka loo qabo si fuduna dunida loo gaarsiiyo
Hay’adaha u xilsaaran oo tijaabooyinka la sameyey ansixiya inta aan tallaalkaasi isticmaalkiisa la billaabin ka hor
Cilmi baarayaasha weli waxay u baahan yihiin iney ogaadaan difaaca ay tallaalada sameeynayaan inta ay gaarasiisan tahay.
Waxaa la sheegayaa in 60-70% dadka dunida ku nool ay tahay inay yeeshaan difaac si fudud uga hortagi kara inuu cudurka balaayiin qof uu ku faafo, xattaa haddii uu tallaalku si wanaagsan uu u shaqeeyo.
Tallaalka qof walba cudurka ma ka difaacayaa?
Dadku marka ay tallalka qaataan difaaca jirkooda siyaaba kala duwan ayuu u saameeyaa.
Balse tijaabooyin horay loo sameeyey iyo taariikhda soo jireenka ee dhanka tijaabooyinka dawadaba waxaa lagu ogaaday tallaalka dadka da’da ah la siiyo inuu sidi la rabay u shaqeynin maadaamaa awoodda difaaca jirka qofka da’da ah ay da’diisu daciifisay. Balse cilmi baarayaashu waxay xaqiijiyeen arrintan iney dhib ku ahayn tallaallada haatan la tijaabiyey ee Faayrasaka Corona.
Previous articleXabad Joojin KMG ah oo loogu baaqay Ciidamada Itoobiya iyo xoogaga Tigrey
Next articleSheekh Shariif iyo Xasan Kheyre oo Muqdisho kulan Xasaasi ah ku yeeshay (Daawo Sawirada)
C/raxmaan C/shakuur oo kashifay xog xasaasi ah oo aan laga ogeyn xaalada Beladweyne xili xiisada sii korortay
Xiisad cusub oo ka taagan gobolka Tigray iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka
Dagaalka Kismaayo ku dhexmaray Ciidanka Jubbaland iyo Ciidamo taabacsan Mucaaradka Maamulkaasi.
Dhageyso:-Booliska Soomaaliya Oo Muqdisho Ku Soo Bandhigay Rag Hubeysan+Sawirro
Akhriiso:Dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday qorshaha soo Xulista Xubnaha Baarlamaanka Jubbaland
DAAWO:Dad magac kuleh Oromada oo goor dhow kadagay Magaalada Hargeysa iyo warar shegaayo in….
Maxaa Ka Soo Baxay Kulan Ay Muqdisho Ku Yeesheen Madasha Xisbiyada Qaran & Xubno Ka Tirsan DF?
Maxay ka dhiggan tahay ‘iclaaminta dagaal’ ee Masar ee Libya, maxaase xiga??
DHAGEYSO:XFS oo saxiixday Heshiisyo kala duwan oo dhowr ah & Wasiir ka hadlay
Xog: Villa Somalia iyo R/W Kheyre oo isku khilaafsan musharaxooda Puntland
Ra’iisul wasaaraha Hindiya oo lagu heysto kaftan siyaasadeed
KASHIFAAD: Xasan Daahir Aweys oo Sanbaloolshe uga digay faragelinta Dowladda Farmaajo